Unoda Kuziva Zvese Zvekusavimbika kwavo? Ita izvi - Ukama
Unoda Kuziva Zvese Zvekusavimbika kwavo? Ita izvi
Kubata nekusavimbika muhukama hwako chiitiko chakakomba chega uye chemoyo.
Wese munhu achaita nenzira yavo uye ave nemaonero avo nezvazvo. Iko hakuna kuraira bhuku rekuti iwe unofanirwa kubva riini kana kuti ungachengetedza sei hukama hwako. Iwe chete ndiwe unogona kusarudza zvaungagare nazvo.
nzira dzekuti urombo nekurasikirwa kwako
Asi mumamiriro ezvinhu akaoma kudaro, pane zvimwe zvinhu zvinongokukonzera kukuvara zvakanyanya.
Kuisa hutano hwako hwepfungwa uye hwepamoyo pakutanga ndiko kukoshesa, saka haudi kuita chero chinhu chichaita kuti mamiriro acho ave anorwadza uye akaoma kutakura kupfuura zvazvave.
Pazasi pane zvinhu zvishoma zvekufunga nezvazvo kana iwe uchida kuziva ruzivo rwekusatendeka kwemumwe wako, uye dzimwe pfungwa dzekuita sarudzo dzakakodzera ramangwana rako.
Chii chekuwana nekukumbira?
Paunotanga kuona kuti mumwe wako anga asina kutendeka, pfungwa yako yekutanga inogona kunge iri yekuti iwe unoda kuziva zvese zvese kuyedza kugadzirisa zvakaitika.
Asi mune yakatove inorwadza mamiriro, kubatwa mune zvisina basa ruzivo, kunyanya nezvemumwe murume / mukadzi, zvinogona kungokonzeresa kukuvara.
Kana iwe uchiziva kuti kusavimbika kweumwe wako ndiko kupera kwehukama hwenyu, kunzwa chero zvimwe nezvazvo hakubatsire. Zviponese iwe pakurwadziwa uye vhara musuwo pavari uye nehupombwe hwavo.
Nekudaro, kana iwe uchida kuyedza kugadzirisa zvinhu, sarudza kuti yakawanda sei ruzivo rwakawandisa uye kuti chii chauri kunyatsoda kunzwa kukubatsira kuti uenderere mberi.
Kune vamwe vanhu, kunzwa zvese zvidiki zvemuviri zvinongoitisa kuti irambe ichidzorera mumisoro yavo uye zvinodzivirirwa zvakanyanya.
Asi kune vamwe, izvo zvavari kufungidzira zvakapetwa kagumi pane izvo zvakanyatsoitika uye kunyatsoziva zvakaitika kunogona kuvabatsira kuti vagamuchire nazvo.
Zvibvunze kuti chii chaunoda kuwana nekunzwa kureurura kwavo. Kana iwe uchida kuziva ruzivo rwehutano hwako, kuvaka mufananidzo uri nani weizvo chaizvo zvakaitika, uye kuti varatidze kuti vanogona kuva vakatendeseka nezve zvakaitika, namatira kubvunza iyo isina hushoma iyo inokubatsira iwe kuita izvi.
Usaite izvi zvinorwadza iwe pachako nekubvunza mibvunzo iwe yaunoziva iwe yausingade chaizvo kuziva mhinduro yacho. Tora ruzivo iwe rwaunoda kuti uenderere mberi uye usiye zvimwe zvese.
Gadzirira kuti zvikuvadze.
Hazvina mhosva kuti mumwe wako anoti kudii, anozvitaura sei, kana kuti ane hurombo sei izvozvi, chero chinobuda mumuromo mavo chinozotyora moyo wako.
Iye munhu wawaivimba naye uye waakakutsaurira nekusavimbika uye hapana kwaanoenda kubva pane izvo.
Hapana chavanotaura chingabvisa chokwadi chekuti vakaita izvi kwauri uye chero ruzivo rwavanokupa nezve kuti ndiani, nei, kana riini richaita kuti kusavimbika kwavo kuve kwechokwadi.
Asi iwe unogona kugona kushandisa ruzivo rwunopihwa nemumwe wako uye kurushandura kuita nzira yakanaka yekuchengetedza hukama hwako.
Nokunzwa kuti sei vazviita, unogona kuwana nzwisiso iri nani yezvakavatungamira kubiridzira uye pamwe ungatarisana nechokwadi chakaoma nezve nzvimbo dziri muhukama hwako pachako dzinoda rimwe basa.
zvinotsvakwa nevarume mumukadzi
Asi sezvaunowana mufananidzo wakajeka wezvavakaita, zvichazonetsa kuti utize chokwadi chekuti munhu waunoda akakunyengera nemumwe munhu.
Unogona kunge uine simba uye kutenda muhukama hwako kuti ubude kune rimwe divi racho, asi ichave iri nzira refu uye inorwadza.
Iva akatendeseka nezve vavariro dzako.
Mumwe wako akakutengesa uye une kodzero yekuda kupopota uye kuvapopotera izvo.
Kunyangwe iwe ungafunge kuti unoda kuti vanzwe kurwadziwa kwavakaisa iwe, kuvarwadzisa haisiyo mhinduro yekuita yako kuenda.
Kana iwe uri kungovabvunza ivo rumwe ruzivo kuti vashandise semabhururu vachipesana navo mumagakava anotevera, iwe uri kungoita kusawirirana pakati pako kupamhi uye kunonetsa kupora.
Kana iwe uchinyatsoda kutsvaga nzira kuburikidza neizvi, edza kungobvunza iyo mibvunzo iyo iwe yaunoda kune yako rugare rwepfungwa. Bvisa pachena nezvehumwe ruzivo, kunyanya nezve mumwe munhu, izvo zvinogona kukonzera kukuvara kwako pachako kuzvivimba uye zvingangoita kuti iwe ude kupaza zvakanyanya kune mumwe wako.
Edza kubvunza iyo mibvunzo inokupa iwe nzwisiso yekuti izvi zvingave zvakaitika sei uye uone kana vachiri vakatya nezve ramangwana newe.
Kana iwe uchitenda kuti unogona kuregerera mumwe wako uye uchida kuti hukama hwako hushande, ruzivo urwo rwaunoda kubva kwavari runofanira kuve chete rwunogona kubatsira iko iko kurapa maitiro, kwete kukupa iwe zvimwe zvikonzero zvekutsaukana
Sarudza yako yakanaka nzira yekutaurirana.
Kana isu tavhunduka uye nemanzwiro zvinogona kuva zvakaoma kuyambuka ruzivo nenzira kwayo. Mashoko anodudzirwa zvisizvo kana kurasika mukuvhiringidzika uye kugumbuka kwekupokana.
Zvinogona kuti iwe unofanirwa kutora nguva yekuunganidza pfungwa dzako uye nekuita izvo zvaunoda chaizvo kuziva usati waedza kutaura nemumwe wako nezve nyaya yavo.
Kuedza kutaura takatarisana chiso nechiso kungave kwakanyanya kukuomera uye ungangoda kufunga nezvekutsvaga muyananisi kuti akupe rutsigiro kana uchinge waita hurukuro dzakaoma.
Kunyora tsamba kunogona zvakare kuve nzira inoshanda yekutaurirana, ichikupa iwe nguva yaunoda kugadzirisa pfungwa dzako pasina kumanikidza kwekutaura zvakananga kune mumwe wako kana uchinge uchirwadziwa.
Kuchinjana tsamba kunokupa iwe nguva nemukana wekutaura zvakajeka manzwiro ako pasina kukanganisa uye inogona kunge iri nzira yechinyakare yekugadzirisa izvo zvaitika.
Pane imwe nguva, iwe uchafanirwa kutarisana uye mutaure zvinhu kuburikidza. Asi kana iwe watopanana tsamba kana uine muyananisi achigovana ruzivo, saka une pekutangira pabasa kubva, nekunzwisisa zvimwe zvaunoda kutaura uye zvimwe zvinoda kutsanangurwa.
nzira yakanakisa yekupedzisa hukama hwakareba
Tsvaga rubatsiro kubva kune wehukama chipangamazano.
Aya mamiriro ese anogona kungova akawandisa kuti imi mose mushande kuburikidza moga. Kutsvaga rubatsiro rwehunyanzvi kana iwe uchinge wakavhiringidzika nezve manzwiro aunoita kana kuti kuenderera kumberi rinogona kunge riri danho rinotevera raunofanira kufunga nezvaro.
Vanopa mazano nezvehukama vanodzidziswa mamiriro akadai. Ivo vanoziva mibvunzo yekubvunza uye iyo yaunofanirwa kudzivirira uye inogona kukubatsira iwe kuti unzwisise zvirinani pane izvo chaizvo zvaunoda kunzwa kubva kune mumwe nemumwe.
Vanogona kukutungamira kubva pamisoro inokuvadza, ruzivo rwunongokuonesa marwadzo, uye kukuendesa kumatambudziko akakonzera kuti zvinhu zviitike uye kubatsira kugadzirisa izvi.
Kukumbira rubatsiro kubva kune mumwe munhu hachisi chiratidzo chekuti hukama hwako hwuchaparara kana iwe usingade kuti zviitwe. Vanachipangamazano vanodzidziswa kuve muyananisi chaiye kumamiriro ezvinhu akadai, vasingadzidzise iwe kana mumwe wako.
zvinoita here kuva neinopfuura imwe mweya
Kana iwe uchida kuita kuti hukama hwako hushande kana kutoda kungonzwisisa zvirinani kuti izvi zvakaitika sei, tsvaga mumwe munhu anogona kukubatsira iwe kutora nzira ine hutano yekutarisana nezvakaitwa nemumwe wako uye akubatsire kufambira mberi kubva pazviri.
Tinokurudzira pamhepo mazano ekupa mazano kubva kuRelationship Hero. Iwe nemumwe wako (mumwe nemumwe nemi moga kana pamwe chete semurume nemudzimai) munogona kukurukura zvinhu nenyanzvi yakadzidziswa kubva munyaradzo yeimba yenyu. kutanga chat kana kuronga nguva yekuita musangano.
Tora nguva yako.
Kuziva kuti mumwe wako anga asina kutendeka kuri kuzokutumira iwe kuburikidza nekusagadzikana kwemanzwiro.
Kana tabatwa mune yakashushikana mamiriro, isu hatigone kupindura nenzira yakayerwa uye tinogona kunetseka kugadzirisa zvidimbu zvakakosha zvemashoko.
Kukumbira kuti uzive zvese panguva imwe chete hazvizokubatsire kuti unyatsobvumirana nezvauri kuudzwa.
Zvinogona kunge zviri nani kwauri, pamoyo, kutora imwe nguva nenzvimbo kuti iwe uwane pamusoro pekutanga kuvhunduka kwekusatendeka kwemumwe wako. Zvione sekuzvidzivirira usati wasimba zvakakwana kuti utore mutoro wepamoyo wezvinhu zvekudanana kwavo.
Kusarudza nguva inokushandira kuti utaure nemumwe wako zvinokubatsirawo kuti usaite sarudzo dzekumhanyirira dzaungazodemba.
Patinenge tichirwadziwa, tinokwanisa kuzvidzivirira uye tobvumira sarudzo dzedu kutongwa nemanzwiro edu. Sarudzo dzakaitwa mukupisa kwehasha dzinogona kunge dzisiri dzakanakira ramangwana rako remazuva mazhinji.
Haufanire kuziva zvese zvese panguva imwe chete. Mirira kusvikira iwe uchinzwa wagadzirira kutarisana nemamiriro ezvinhu uye woisa pekutanga hutano hwepfungwa. Zvichatora simba kutarisana nemumwe wako uye nekushandira kunze kana mune ramangwana pamwe chete, saka ita shuwa kuti wagadzirira izvo.
Hapana anokwanisa kukuudza maitiro ekubata hukama hwako. Shamwari uye mhuri vanogona kuve nemafungiro avo, asi kana mumwe wako anga asina kutendeka, ihwo hukama hwako kusarudza kuti oguma here kana kuchengetedza.
Ndiwe uchafanira kurarama neruzivo, kana kushomeka kwaro, nezve nyaya. Ungasarudza here kurarama hupenyu hwako usina ruzivo rwese asi uchiziva kuti panogona kunge paine zvimwe, kana kugara mune ruzivo rwezvose zvakaitika uye uchiti zvadzokere mupfungwa dzako?
Kuita sarudzo chaiyo kungave mutsauko pakati pehukama hwako kupona kana kwete.
sei kuziva sei unokwezva uri
Kana iwe wakakuvara zvakanyanya kuti uregerere mumwe wako, zvirinani kurega hukama huchienda pane kugara usingavimbe uye wakabatirira muhasha dzinotyisidzira kubuda munharo dzinouya.
Kana iwe uchinyatsotenda kuti hukama hwako hunogona kudzoka, saka gadzirira kuti utore nguva yekuvaregerera.
Zvinozokumbira zvakawanda iwe kuti ugone kuregerera uye kufambira mberi kubva pane izvi uye kudzidza kuvimba kuti mumwe wako haazokuvadze zvakare.
Mune ino kesi, iwe unofanirwa kufunga nezvemibvunzo iwe yaunobvunza uye kana mhinduro dzavo dzichizoita kuti zvive nyore kana kuti zviome kuti iwe uvaregerere. Iwe haugone kuidzosa kana yagovaniswa.
Iwe unofanirwa kuzviisa iwe pekutanga uye funga nezve chii chingave chinokuvadza kune iwe pachako kuzvivimba kana ivo vachigovana izvo.
Zvimwe zvinhu zviri nani kusiiwa zvisina kutaurwa kana iwe uchida kuita kuti hupenyu pamwe chete hushande. Iwe hausi kuzodzokera pane zvakajairwa nehusiku saka enda zvishoma uye utore nguva yako kusarudza zvakakunakira iwe.
17 Matanho Ekuregerera A Kubiridzira Partner Uye Tora Kupfuura Kusatendeka
Unofanira Kutarisana Nemumwe Mukadzi? Izvo Zvaunoda Kuziva
Maitiro Ekutarisana Nekubiridzira Partner / Wawakaroorana naye: 11 Matipi Ekubatsira Iwe Kuburikidza Izvo
Maitiro Ekuudza Kana Iye / Iye Achizobiridzira Zvakare: Gumi Matanho Ekutarisa
Maitiro Ekuti Uwedzere Kupfuura Kubiridzirwa Pa
14 Zvikonzero Nei Varume Uye Vakadzi Vanobiridzira Pane Ivo Ivo Vavanoda
11 Zvinhu Zvingafungiswe Kubiridzira Muhukama
varume nevakadzi vanotaurirana sei zvakasiyana
ndakarasa zvese muhupenyu hwangu makotesheni
kuziva sei kana ndichimuda
chii chaunonyanya kufarira muhupenyu